Ardayda fasalka Oo Sorters, Beeraha Products Job Description / Meelaynta Oo Sample Duty - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Ardayda fasalka Oo Sorters, Beeraha Products Job Description / Meelaynta Oo Sample Duty
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 931 Views
fasalka, kala duwan, ama u guuraan cuntada in ay tahay oo dhan, iyo alaabtoodii oo kale beer by qiimaynta, pounds, hooska, ama hadyada meejeeda,.
Darajo iyo sort waxyaabaha sida ay xubno ka ah sida tusaale ahaan midabka, noocyada, dhererka, ballaaran, fiiri, dareenka, caraf udgoon, iyo tayada si loo hubiyo in maaraynta iyo isticmaalka ku haboon.
Rogrogmadaan waxyaabaha shaqayn ama liita ama arrin aan caadi ahayn, iyo alaabtoodii oo booskaas waa la aqbali karo ee haamaha in ay gacanta in ka badan yahay.
Miisaan alaabta ama qiimaynta pounds ay, rata ama ay dareento.
Ku rid alaab weelal waafaqsan heerka iyo heerka fasalada on dheryihii.
Report id ama fasalka tiro tikidhada ama maraakiibta, helitaanka, ama gogosha iibka.
duuduubmay fiber Independent faraha dhexdooda si loo ogaado tayada midaysan qalabka iyo xoog.
Akhrinta weedho Aqoonta-Aqoonta iyo weedho diyaar in files shaqo la xiriirta.
Active Dhagaysi-bandhigo waxa qaar kalena waxay yidhaahdeen dhegaysanayay, iyadoo la isticmaalayo waqti aad si ay u fahmaan arrimaha la sameeyo, yaabban weydiimo sida ku habboon, oo aan marnaba ku cabirayaan at daqiiqado aan ku haboonayn.
Soo saaridda-tiimbanaynay si fiican u qoran sidii haboona baahida dhagaystayaasha.
Isagoo ka hadlayay-hadalka-dadka kale u gudbiyo macluumaadka si sax ah.
xisaabta si uu u xaliyo dhibaatooyinka Xisaab-Kafaa'iidaysiga.
Research-Dalbashada siyaasadaha caafimaad iyo hababka si uu u xaliyo dhibaatooyinka.
Xukun iyo sabab loo garto xirfadaha iyo duleella natiijada Criticalthinking-Adeegsanaya, xal kale ama habab ee arrimaha.
Active Learning-Fahamka saamaynta info in waa cusub oo mustaqbalka kasta oo problemsolving jira iyo go'aan qaadashada.
Xeeladaha-Kafaa'iidaysiga iyo xulashada farsamooyinka coachingANDinstructional iyo farsamooyinka saxda ah ee xaaladda marka hanashada ama wacyi dhibcood cusub Learning.
Raad-MonitoringORAssessing oolnimada naftaada, akhyaarey kuwa kale, ama shirkadaha si ay u abuuraan isbedel ama ka fiirsan tallaabo sixid ah.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada badnaanta othersA oo og sababta ay u fal sababtoo ah waxay samayn.
falalka Control-beddelidda ee la xiriirta hawlaha othersI.
Qancinta-qanciyo dadka kale in ay madaxdii ama falalka ay ku beddesho.
Dood-Gudbinta wada kuwa kale oo isku dayay in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
dadka kale Training-aad bartid loogu taraaroxo talaabo ka qaado.
Orientation-ahaantii Service raadinaya habab si loo caawiyo shakhsiyaadka.
Advanced Problemsolving-Kala dhibaatooyin sare iyo dib u macluumaadka ku haboon tixgelin iyo in ay soo saaraan doorashooyinka iyo codsan dawayn.
Hawlgallada Qiimeynta-la eego shuruudaha baayacmushtarkaagii iyo dooni in la sameeyo qaabka a.
Design-Engineering Technology si ay u bixiyaan user iyo samaynta ama la beddelo shuruudaha qalabka.
qalab iyo nooca qalabka ee loo baahan yahay si dhab ah si ay u fuliyaan hawl Tools Selection-Aqoonsiga.
qalabka Rakibaadda-darista, mashiinada, fiilooyin, ama barnaamijyada si ay u qanciso shuruudaha.
Horumarinta-curinta codsiyada computer for hawlaha kala duwan in ay yihiin.
wicitaanada Operation Tracking-Daawashada, cabirrada, ama signalada dheeraad ah si loo hubiyo in ay jirto qalab ah oo hadda si sax ah oo ka hawlgala.
nidaamka Habka iyo Control-Qabashada qalabka ama hababka.
Dayactirka-dhammaystirayo dayactirka joogtada ah ee qalabka iyo aqoonsashada goorta iyo nooca adeegyada lagama maarmaan noqon doonaan.
sababo dhib-Go'aaminta for shaqeeya khaladaadka iyo go'aaminta sida in la sii wado oo ku saabsan wax kasta oo ka mid ah.
nidaamyada celinta-Daboolid ama qalabka isticmaalka qalabka oo lagama maarmaan u.
baaritaanka iyo imtixaanada alaabta Quality Control-imtixaanka-fulinta, bixiyeyaasha, ama hawlaha si ay u qiimeeyaan wax ku oolnimada iyo tayada.
View iyo faa'iidooyinka Go'aan-la tixgaliyo iyo kharashka guud ee hawlaha suurto gal ah in la doorto mid ka mid ah in uu yahay ugu haboon.
Systems Falanqaynta-Go'aaminta hagaajin hab in jawiga ugu, ganacsiga, iyo sidoo kale xaalado saamayn doonaa faa'iidooyinka iyo waxa sort of habka shaqeeyaan waa in.
talaabooyin ama tilmaamo ah waxqabadka nidaamka Methods Qiimeynta-kala sidoo kale sax ah ama tallaabooyinka loo baahan yahay si kor loogu qaado tayada shaqo, iyadoo la raacayo ujeedooyinka qalabka.
munaasabadda dadka kale Time-Management-qabashada ay la socdaan oneis muddo u gaar ah.
Hawlgalka of Financial Resources-Go'aansiga sida dakhliga la doonayo in loo isticmaalo si ay shaqo oo dhamaystiran ka heli, iyo xisaabaadka ku saabsan kharashyada kuwan.
Kormeerka Qalabka Resources-daawashada iyo hesho in isticmaalka habboon ee shirkadaha, qalab, iyo qalabka lahaa baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-Abuuritaanka yididiilo, oo hagaya dadka waawayn, sababtoo ah waxay ay ku shaqeeyaan, aqoonsashada dadka ugu waxtarka badan ee hawsha in.
Waxbarashada Qualification Shuruudaha aqoonta
In ka yar-badan Diploma School Top a
Diploma Senior High School (ama GED ama Senior School isu Qualification)
Qaar badan oo Fasallada Kulliyadda
Shaqo Control Skills u Baahan
Tenacity – 81.08%
Rabitaan – 84.59%
Gargaarka – 82.78%
Dhibaatada for Qaar kale – 82.64%
Sinaanta Bulshada – 84.27%
Is Control – 84.64%
Dulqaadanayn cadaadis – 80.58%
halaynta – 94.96%
Focus on Details – 87.92%
Integrity – 89.27%
Adoo ka fakaraya Analytical – 86.09%
Telephone Operators Job Description / Shaqooyinka Oo Sample Duty
Pingback: The Dreaded Interview Question - Xarunta Blog Australia